Voan’ny Coronavirus teny Alasora Mbola tsy fantatra hoe iza sy taiza marina
Mbola tsy nampahafantarina ny mpitantana ao amin’ny Kaominina Alasora ny mombamomba ilay olona voalaza fa tratry ny coronavirus. Hatramin’izao tsy fantatra hoe iza sy taiza teto Alasora no nisy ilay “cas contact”
noresahin’ny fanjakana, hoy ny Ben’ny tanàna Jimmy Randriantsoa. Anaovako antso avo foana amin’ny fanjakana ny hoe tokony hisy ny mangaraharaha amin’ny fitantanana an’ity coronavirus ity, ary ny fizarana ny vaovao no anisan’ny fanohitra iray lehibe hiadiana amin’io, hoy izy. Raha tsy mampahafantatra anay ety ifotony ianareo ahazoanay mandray ny fepetra ny fepetra mifanaraka amin’izany, dia tsy ho vitan’ny fanjakana foibe irery io, hoy ity ben’ny tanàna ity. Tsy misy resaka politika ary mahafinaritra ny fiaraha-miasa ato amin’ny kaominina Alasora, ka aleo tsy asiana resaka loko politika, hoy io Ben’ny tanàna io.